List oo dhamaystiran Sida loo celi iPhone Password
Habayn waxaa si weyn u isticmaala dadka isticmaala iPhone in macluumaadka gaarka ah ay ka soo ifbaxay ilaaliyo. Waa mid aad u fudud in ay qarka u habayn ah afarta lambar (ama ka badan) si aad naftaada sugee si ay u helaan iPhone. Si kastaba ha ahaatee, habka fudud in ay sii ammaan telefoonka aad sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa dhibaato marka aad illoobin habayn. Haddii aad illowdo furaha, aad leedahay si ay dib u iPhone. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan helin sida saxda ah loo sameeyo, waxaa laga yaabaa inaad lumiso oo dhan xogta shakhsiga aad ku iPhone. Laakiin ha walwalin, ee qodobkan, waxaan ka wada hadli lahaa doorashooyinka aad leedahay si ay dib ama ay garab habayn waxaa illooba qofka aad iPhone.
Qaybta 1. Sida loo celi iPhone Password haddii Waxaad xusuusan Password ee hadda
Qaybta 2. Sida loo celi iPhone Password halka Ilowday hadda Password
Haddii aad weli xusuusan habayn hadda, ka dibna dib iPhone hadalka password waa iska sahlan: Tag Settings> General> Touch ID & habayn (macruufka 9/8/7) ama habayn Lock (macruufka 6)> qortaa erayga sirta ah ee hadda jira iyo Change tuubada habayn. Markaas galaan habayn cusub. Taasi waa.
Xaaladdan oo ah meesha aad kaliya aadan xusuusan karin habayn aad u qotomiyey, doorashada aad ku hadhay la yahay si loo soo celiyo qalab aad kaga imaanayo. Dadka qaar ayaa la weydiiyay haddii ay tahay suurto gal ah in dib u habayn ama iPhone aan soo celiyo. Sure aad dib kartaa iPhone aan celin, laakiin waa inaad qaaddaan arrimaha khasaaro xogta. Soo Celinta waa doorasho fiican. Waxaa tirtiro content oo dhan ku saabsan qalabka-oo ay ku jiraan habayn-oo badalay la gurmad ah ee aad dooratay. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale ku xiran tahay in aad qabto file gurmad ah ama aan. Isku day in aad nasiib by socda mid ka mid ah siyaabaha hoos ku qoran in xaq ay aad u:
Xalka 1: Dib u celi habayn iPhone la Lugood (marka qortaa erayga sirta looma baahna)
Xalka 2: Dib u celi iPhone habayn la iCloud Raadi My iPhone (markaad aragtaan My iPhone waa ON)
Xalka 3: Dib u celi iPhone habayn la Recovery Mode (haddii labada xal 1 iyo 2 ma aha kuwa la heli karo)
Xalka 4: Siri laga yaabaa in lagu furo aad iPhone, waxa ay isku dayi!
Haddii aad illowday in aad habayn, waxaad weli u furo kartaa iPhone haddii aad synced qalab aad la Lugood. Iyada oo Lugood, aad u soo celin kartaa iPhone ka gurmad la soo dhaafay iyo ka saari habayn ka qufulan iPhone halka xafidaada macluumaadka aad. Si aad u soo celin aad iPhone dhex Lugood, raac tallaabooyinka ku siiyey;
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in kombiyuutarka aad si caadi ah u hagaagsan la via cable USB ah.
Tallaabada 2. Lugood Launch. Haddii aad synced aad iPhone la Lugood, markaas maya "ku qortaa erayga sirta" ayaa loo baahan yahay. Haddii aad Lugood weydiiyo in galaan habayn ah, isku day inaad computer kale. Haddii kale, waxaad u leedahay in ay raacaan habayn iPhone Warbixannada la Recovery Mode qaybta hoose.
Tallaabada 3. Lugood si toos ah u hagaagsan doonaa iPhone iyo abuuro file gurmad ah. Haddii aan samayn, waa in aad u hagaagsan Lugood iyo abuuro file gurmad ah gacanta ay suuqa kala Kooban.
Tallaabada 4. In uu furmo suuqa Kooban, waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka "Soo Celinta iPhone". Waxaa Riix oo raac dardar si ay u doortaan Lugood gurmad ugu dambeeyay in la soo celiyo aad iPhone.
Your habayn laga tirtirayaa iyo xogta oo dhan waa la soo celin doonaa ka gurmad, ka dib markii geedi socodka dib u soo celinta dhamaato. Hadda awood u yeelan doonaan si ay u helaan iPhone aan habayn kasta oo aad.
Haddii aad karti Raadi My iPhone aad iPhone, waxaad u isticmaali kartaa si masixi habayn illowdeen. Tallaabooyinka loo raaco waa:
Tallaabada 1. Tag icloud.com/#find iyo gasho la ID Apple on your computer aad.
Tallaabada 2. Click Raadi My iPhone.
Tallaabada 3. Click All Qalabka sare ee suuqa kala browser aad.
Tallaabada 4. Dooro iPhone oo dhan qalabka ay ku qoran. Riix masixi iPhone in masixi aad iPhone oo ay la socdaan ay habayn.
Tallaabada 5. Isticmaal Kaaliyaha Setup ah qalabka si aad u soo celin gurmad ugu dambeeyey ee qalab aad.
Fiiro gaar ah: Your habayn laga tirtirayaa iyo xogta oo dhan waa la soo celin doonaa ka gurmad iCloud. Hadda awood u yeelan doonaan si ay u helaan iPhone aan habayn kasta oo aad.
Haddii aad qabto marnaba synced qalab aad la Lugood, ama haddii aan karti aad Raadi My iPhone aad iPhone, aad leedahay si aad u saaray qalab aad hab kabashada in masixi ah qalab iyo habayn. Raac talaabooyinka lagu soo celiyo qalab aad:
Tallaabada 1. barkinta dhan fiilooyinka ka iPhone oo dami;
Tallaabada 2. Press iyo hay badhanka Home oo lagu xiro qalabka aad si Lugood. Haddii aad iPhone ma noqon ma on, fadlan on gacanta noqon.
Tallaabada 3. Continue haysta button Home ilaa aad ka aragto shaashadda Connect in Lugood. Lugood idin xusuusin doonaa in uu ogaado qalab hab kabashada.
Tallaabada 4. Riix OK. Tab Kooban ee Lugood muuqataa. Guji "Soo Celinta iPhone" iyo soo celinta aad iPhone.
Doorasho la yidhaahdo "U ogolow in ay helaan Siri marka la habayn qufulan", haddii ay karti, ogolaan doonaa Siri si ay u helaan wax badan oo hawlaha dibadda joogaa oo habayn. Habkaani waxaa ay halis adag ku tahay amniga ee aad iPhone.
Fiiro gaar ah: In kastoo habkan waxaa laga heli karaa iPhone qaar ka mid ah, waxa ay yihiin hanjabaad seruity aad iPhone. Ka dib markii furo aad iPhone, waa in aad xannibi doorasho isagoo raacaya tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Tag "Settings" icon ka screen guriga.
2. Laga soo bilaabo "Settings" menu, ka jaftaa "Guud".
3. Dooro "qufulka habayn" doorasho ku jira "Guud" menu.
4. leexo ah "U ogolow in ay helaan Siri marka la habayn qufulan" ikhtiyaar in "OFF".
> Resource > iPhone > Liiska dhamaystiran celi iPhone Password